1/2 block ukusuka elunxwemeni, w/pool, tub eshushu, gazebo, sundeck, balcony--ilinde usapho lwakho
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguThomas Beach Vacations
UThomas Beach Vacations unezimvo eziyi-658 zezinye iindawo.
I-SANDWEDGE... ii-condos zakudala zaseNorth Myrtle Beach ezisuka kwiiVacations zaseThomas. Phumla kwi-balcony yakho okanye ukonwabele ukuntywila echibini langaphandle. Relax kwi-tub eshushu emva komjikelo ocelomngeni kwiikhonkco zegalufa okanye usuku olumnandi elunxwemeni. Indawo yokuphumla kwi-sundeck ebanzi okanye phantsi kwe-gazebo enomthunzi. Iqula langaphandle liyafumaneka ukuqala ngo-Epreli 1 okanye impelaveki yePasika, nokuba yeyiphi na eza kuqala kwaye ivale ngo-Okthobha woku-1.
NGEKHITSHINI EXHOBE NGOKUGQIBELELEYO, uya kuba nesigqibo esinzima-isidlo sangaphakathi nje esiqhelekileyo okanye kwindawo yokutyela kwindawo entle yokutyela. Ukufumana iingcebiso, buza iinkonzo zethu zeendwendwe okanye ujonge iphepha lethu lokutyela lewebhusayithi. Uyakuba malunga nebhloko ukusuka kwi-surf kunye nesanti, kwaye kulula ukuhamba ukuya ezivenkileni, iikhefi, kunye nobomi basebusuku beSitrato esikhulu se-Ocean Drive.
I-SANDWEDGE YINTANDO ethandwayo ngabalandeli bomculo waselwandle kunye nabadanisi be-shag ngexesha leMinyhadala ye-SOS yonyaka - iMid-Winter Classic kaJanuwari, iSafari yaseNtwasahlobo ka-Epreli, kunye neMfuduko yasekwindla ngoSeptemba. Qiniseka ukuba ugcina kwangethuba! I-WIFI yasimahla iyafumaneka kwezinye iicondo zeSandwedge. Izithintelo zokupaka zithintela izithuthuthu kunye neenqwelo ezirhuqwayo.
I-SANDWEDGE 311 yikona kumgangatho wesithathu wekona kunye nabalandeli besilingi, i-TV ye-flatscreen ye-intshi engama-47 (LR), i-40-intshi ye-BR TV, kunye nebhalkhoni enombono we-pool. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide kunye neendawo eziqhelekileyo zeSandwedge zibandakanya:
Ngaphandle kweShower yaseLwandle
Iphuli yangaphandle kunye neTub eshushu
Ezinye iimpawu (*) azikho kuzo zonke iicondos.
Umbuki zindwendwe ngu- Thomas Beach Vacations
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- North Myrtle Beach